Muqdisho: Ergo Doorasho Oo Dibadda Loo Saaray Kadib Buuq Ka Dhashay Doorasho Xildhibaan – Goobjoog News
Waxaa hadda Muqdisho ka socota dhex-dhexaadin iyo wada hadal looga gol-leeyahay sidii loogu tartami lahaa kursiga ay leedahay beesha Habar-Carfoon (Gadabuursi) oo qeyb ka aha deegaannada Somaliland.
Goobta doorashada ka socotay waxaa ka dhacay buuq looga soo horjeeday khudbadda mid ka mid ah labo qof oo kursigan u tartamaya, waa Cabdiraxmaan Axmed Ceynaan taas oo keentay in ciidamada ammaanka ay ilaa 20 ergada doorashada ka tirsan dibadda u saaraan, kaararkana ka qaadaan.
Kursigan maanta la dooranayo, waxaa bishii Febraayo ee sanadkii hore ka geeriyooday Xildhibaan Siciid Xasan Geeddi, waxaana hadda u tartamaya wiilkiisa Faarax Saciid Xasan iyo Cabdiraxmaan Axmed Ceynaan.
Sida uu ku warramayo weriyaha Goobjoog News ee madasha doorashada Maxamed Saciid, guddoomiyaha guddiga doorashada madaxa-bannaan Xaliimo Ismaaciil Yarey oo ugu dambeyntii meesha ka hadashay waxaa ay sheegtay in doorashada dib u dhacday, wixii dhacana ay cashar ka barteen iyada oo intaasi ku dartay in ay dib ka soo sheegi-doonaan xilliga doorashada.
Wixii arrintan ka soo kordha, kala soco Goobjoog News